घटना र विचार, न्युज डेस्क ii 1 month ago January 20, 2020
धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक सोमबार भने झन्डै साढे २६ अंकले ओरालो लागेको छ । लगातार उकालो लाग्दै आएको बजार थामिएर आज ओरालो लागेको हो । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक आज २६.५४ बिन्दुले घटेर एक हजार ३१७.११ मा पुगेको छ ।
यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक ४.८६ ले घटेर २८३.५३ मा पुगेको छ । नेप्से ओरालो लागे पनि कारोबार रकम झन्डै रु. दुई अर्बबराबर छ । कुल १८२ कम्पनीको ५८ लाख ४६ हजार २३८ कित्ता सेयर रु. एक अर्ब ९७ करोड तीन लाख ८७ हजार ९९३ मूल्यमा खरिद–बिक्री भए ।
नेप्सेका अनुसार कारोबार भएका सबै उपसमूहको सेयर ओरालो लागेको छ । बैंकिङ १५.८८, व्यापार ५४.५९, होटेल ६४.०९, विकास बैंक ५२.८७, जलविद्युत् ४२.२२, वित्त २२.३३, निर्जीवन बिमा ११६.३१, उत्पादन ७१.९१, अन्य १३.५३, लघुवित्त ५७.८८, जीवन बिमा १५४.६५ र सामूहिक लगानी कोष ०.१८ ले घटेको छ ।
नेप्सेका अनुसार कारोबारका आधारमा हिमालयन डिस्टिलरी शीर्ष स्थानमा छ । सो कम्पनीको रु. २० करोड ९२ लाख ९५ हजार ९३६ मूल्यबराबरको सेयर कारोबार भई शीर्षस्थानमा रह्यो । एनसीसी बैंक रु. १३ करोड ३२ लाख १६ हजार ८१७, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी रु. नौ करोड ३० लाख दुई हजार ११७, प्रभु बैंक रु. ६ करोड ७१ लाख ३८ हजार ३५२, एनआईसी एसिया बैंक रु. पाँच करोड ९८ लाख ४८ हजार ९०२, शिवम् सिमेन्ट रु. पाँच करोड ८० लाख ३० हजार ९५५ र सूर्य लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी रु. पाँच करोड ४४ लाख ९५ हजारबराबरको कारोवार भई शीर्ष स्थानमा रहे ।
मल्टीप्रपोज फाइनान्स कम्पनी ९.७७, ग्लोबल आईएमई बैंक ९.७२, सूर्य लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी २.६१, प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्स कम्पनी २.५४, सिनर्जी पावर १.९२ र मञ्जुश्री फाइनान्स कम्पनीका सेयरधनीले १.८६ प्रतिशतले कमाए । पाँचथर पावर कम्पनी १०, पोखरा फाइनान्स ९.८२, हिमालयन पावर पार्टनर ९.४१, विशाल बजार कम्पनी ९.२२, पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर ८.६५ र हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनीका सेयरधनीले ८.३३ प्रतिशतले गुमाए ।